Ny keyboard Fleksy dia lasa afaka | Androidsis
Eny, amin'ny zavatra azontsika fantarina manomboka izao, Manaraka ny dian'ny Swiftkey tamin'ny androny i Fleksy, rehefa nanapa-kevitra ny hiala amin'ny rindranasa karama ho amin'ny fampiharana maimaimpoana izy. Zava-misy iray namela ireo mpampiasa maro hanandrana ireo toetra tsara sy tombontsoa azo avy amin'ny iray amin'ireo fitendry keyboard tsara indrindra ho an'ny Android, izay namela azy hanohy hivoatra ho lasa vokatra somary tsara kokoa noho izy.
Io fivoarana io dia niaina tokoa izay efa nodinihin'ireo mpamorona miandraikitra an'i Fleksy mba hitsambikina ao anaty renirano ary manolora iray amin'ireo kitendry haingana indrindra any maimaim-poana ho an'ny finday. Ka manomboka anio dia afaka miditra amin'ny fisintomana maimaimpoana ianao na dia misy aza ny micropayments tsy mety simba ao anaty ny rindrambaiko mba hanatsarana ny fanatsarana ny traikefa atolotr'i Fleksy ho fitendry. Amin'izao fotoana izao, izy ireo koa dia niandraikitra ny famoahana zava-baovao tena mahaliana izay hazavaiko ny andalana vitsivitsy etsy ambany.
1 Kitendry fitetezana haingana be
2 $ 8 ho an'ireo nividy azy
Kitendry fitetezana haingana be
Fleksy dia kitendry efa fantatry ny rehetra samy amin'ny iOS sy Android. Ankehitriny dia maimaim-poana izany, noho izany dia tsy hisy ny fialan-tsiny mety hanandramana azy farafaharatsiny ary hahitana raha tena mandresy lahatra antsika izy io, ka io no fampiharana ankafizintsika indrindra ny manoratra ireo hafatra an'arivony alefanay isan-kerinandro amin'ny fitaovantsika.
Midika izany fa miroso amin'ny fahalalahana ny micropayments dia toa manome vola mitendry piano izay misy antsipiriany tsara miaraka aminy. Nanazava i Fleksy fa ny antony lehibe mahatonga an'ity fanovana ny maodelin'ny orinasa ity dia satria afaka manolotra ny kitendry azy ireo amin'ireo mpampiasa maro an'isa izy ireo. Amin'ny fampitomboana ny tobin'ny mpampiasa, hifantoka amin'ny fanomezana fanatsarana vaovao amin'ny lafiny rehetra i Fleksy.
Ny leitmotif-ny dia izay ny mpampiasa dia manana ny fotoana hiainany ny fitendry keyboard haingana, maneho hevitra ary manintona. Toetra tsara telo izay efa misy amin'ny kitendry mifaninana hafa ka manomboka izao dia hiditra tanteraka ao amin'ny Play Store izy ireo hifaninana amin'ireo efa fantatry ny rehetra.
$ 8 ho an'ireo nividy azy
Tsy hadinon'i Fleksy ireo izay nanampy mba ho fitendry izay ankehitriny, nanomboka teo fampiharana naloa izany. Ho an'ireo mpampiasa ireo lohahevitra sy fanitarana be dia be no hatolotra maimaimpoana miaraka amin'ny sanda 8 dolara.
Mikasika ny zava-baovao izay entin'ity dingana ity manomboka amin'ny maodely voaloa ka hatramin'ny maimaim-poana, dia ahitana fomba fijery antsoina hoe Highlight. Ka i Fleksy dia ho afaka hanampy bebe kokoa amin'ilay mpampiasa amin'ny alàlan'ny GIF, sticker ary karazana atiny hafa mifototra amin'ny zavatra soratin'ny mpampiasa. Raha tokony hikaroka taratasy fametaka sticker sy GIF amin'ny tranokala hafa ny mpampiasa, dia mila manindry ny tenifototra fotsiny i Fleksy mba hikarakarany ny votoaty tadiavina.
Una vaovao tsara ho an'ireo izay nanandrana nanandrana an'i Fleksy ary zahao raha tena marina ity hafaingam-panoratana ity raha ny efa nambarany tamin'ny fotoana sasany. Ho an'ny ambiny, bebe kokoa ny milaza sy manasa anao hanandrana azy amin'ny telefaonanao. Kitendry tsara izay hitohy ho sarotra, na dia efa manana traikefa amin'ny iOS sy Android aza ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Mijanona maimaimpoana i Fleksy miaraka amin'ny micropayments ao anatin'ny fampiharana
Ity rendrarantitra ity dia azo antoka fa nitondra dingana lehibe, olana aotra.
toy ny tamin'ny androny Swiftkey